'भ्रष्टाचार एक नम्बर समस्या होइन, पाँचौं-छैठौं हुनसक्छ' :: Setopati
शंकरप्रसाद अधिकारी काठमाडौं, चैत ५
आधुनिक संसारमा ठूलो भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कहाँ-कसले जोड्यो होला?
यस्ता ठूला भ्रष्टाचार सफल प्रजातन्त्रमा होइन, तानाशाहमा भएको पाइन्छ।
‘द गार्डियन’ अखबारका अनुसार इन्डोनेसियाका पूर्व तानाशाह सुहार्तोले ३२ वर्षे कार्यकालमा १५ देखि ३५ अर्ब डलर सम्पत्ति जोडे।
फिलिपिन्सका पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनाण्ड मार्कोसले १४ वर्षे कार्यकालमा ५ देखि १५ अर्ब डलर कुम्ल्याए।
जायर (हाल कंगो) का मोबुतो सेसेकोले ३२ वर्षे तानाशाहमा कम्तीमा ५ अर्ब डलर थुपारे।
अंगोलामा सन् २००१ मा मात्रै तेल खानीबाट एक अर्ब डलर भ्रष्टाचार भयो। त्यस्तै, नाइजेरियाका सानी अवाचा र सर्वियाका स्लोवोदान मिलोसेभिकले एक अर्ब डलर कुम्ल्याए।
हैटीका डुभालियर, पेरूका अल्वर्टो फूजिमोरी, युक्रेनका पाभ्लो लाजारेन्को र निकारागुवाका अर्नोल्डो अलेमान पनि अकुत सम्पत्ति जोड्नेमा पर्छन्।
अमेरिकामा पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर अमेरिकीहरू नै भन्छन्। सन् २००६ मा गरिएको ग्यालोप मत सर्भेक्षणमा ‘सरकारी निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार छ’ भन्नेमा ५९ प्रतिशत सहमत थिए। २०१३ मा यो मत ७९ प्रतिशत पुग्यो।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार नहुने कहलिएको डेनमार्कमा पनि केही मात्रामा हुने रहेछ।
विकासोन्मुख मुलुकका लागि भ्रष्टाचार ठूलो समस्या हो। गरिबी र युद्धग्रस्त तथा तानाशाही राज्यमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नामक संस्थाले भ्रष्टाचार अनुभव सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स) प्रकाशित गर्छ। यसमा १०० अंकले शून्य भ्रष्टाचार र शून्य अंकले पूर्ण भ्रष्टाचार देखाउँछ।
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पछिल्ला दुई-तीन वर्षमा नेपालले प्रगति गरिरहेको छ। सन् २०१५ मा नेपालको अंक २७ थियो भने २०१७ मा ३१ छ।
जहाँ गरिबी, त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचार। नेपालमा भने यो अलि मिल्दैन। प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा नेपाल २५ औं गरिब मुलुक हो। भ्रष्टाचार सूचीमा हामी ५६ नम्बरमा छौं।
नेपालभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएका राष्ट्रमा नेपालभन्दा बढी भ्रष्टाचार देखिन्छ। जस्तै, म्यानमार र लावोसको अंक २९ छ भने रसिया, इरान र मेक्सिकोको २८ छ। त्यस्तै, बंगलादेशको २६ र कम्बोडियाको २० छ। यी देश नेपालभन्दा बढी भ्रष्ट देखिएका छन्।
माल्दिभ्स ३१ अंकसहित नेपाल बराबर छ। डेनमार्क ८८ अंकसहित सबभन्दा कम भ्रष्ट देखिन्छ। सोमालिया १० अंकसहित सबभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुकमा परेको छ।
यो हेरेर नेपालले सन्तोष मान्ने अवस्था भने कदापी होइन। सामाजिक निराशा मात्र सिर्जना हुने गरी वास्तविकता ढाकछोप नगरौं भन्न मात्र खोजिएको हो।
निराशा विध्वंसको जननी हो। समाजमा व्याप्त निराशाका कारण पुनः विध्वंसले टाउको उठाउँदैछ। यसबाट बचौं भन्न खोजिएको मात्र हो।
नेपालभन्दा कम भ्रष्ट भुटान, भारत, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तानको क्रमश: ६८, ४१, ३९, ३८ र ३३ अंक छ। भुटान त २५ कम भ्रष्ट मुलुकभित्रै छ। १८० मुलुकमध्ये दुई तिहाईको ५० भन्दा कम अंक छ। ५० भन्दा कम अंकले भ्रष्टाचार व्याप्त भएको मानिन्छ। राष्ट्रहरूको औसत अंक ४३ छ।
नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुनी र संस्थागत व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा सुदृढ मानिन्छ। भारतमा अन्ना हजारेले नेपालको जस्तै कानुनी व्यवस्था माग गर्दैछन्। राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताले नेपालको अंक भारतभन्दा कम भएको हो। यो सुधारिँदै जानेछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीले यसलाई विस्तारै नियन्त्रण गर्नेछ।
कमजोर लोकतन्त्र र तानाशाह भएका देशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ उक्लँदो देखिन्छ। इन्डोनेसियाका पूर्व तानाशाह सुहार्तो र फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति मार्कोसकै कारण यी देश अति नै भ्रष्ट भएका हुन्।
भ्रष्टाचार निर्मूल भएपछि मात्र देश समृद्ध हुन थाल्ने होइन। भ्रष्टाचार हुँदाहुँदै पनि समृद्ध हुन सक्नुपर्छ। समृद्धिमा उकालो लागेसँगै भ्रष्टाचार ओरालो लाग्न थाल्छ। यो अध्ययन र अनुभवले सिद्ध भएको छ।
रोज अकरमेनको सन् १९९९ को अध्ययनले कोरिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र भियतनाममा भ्रष्टाचार उच्च हुँदाहुँदै उच्चदरमा विकास भएको देखायो।
भ्रष्टाचारले आर्थिक वृद्धि रोक्छ भन्ने सिद्धान्त सबै अवस्थामा लागू नहुन सक्छ। सार्वजनिक संस्थाहरू धेरै अक्षम भएका देशमा भ्रष्टाचारले आर्थिक वृद्धि उत्प्रेरित गर्ने तथा विकासको पाङ्ग्रालाई ‘लुब्रिकेट’ गर्दो रहेछ। यसले निर्णय छिटो गराउन ‘स्पिड मनी’ को काम गरेको पाइयो।
यो कुरा अमेरिकी राजनीतिशास्त्री सामुल पी हन्टिङ्टनले पचास वर्षअघि नै भनिसकेका थिए। त्यसपछिका धेरै अनुसन्धानले यो प्रस्तावना स्वीकारेको पाइन्छ।
यसको अर्थ नेपालमा भ्रष्टाचार रहिरहोस् भन्ने होइन। भ्रष्टाचारले आर्थिक वृद्धिमा बाधा पारेका निष्कर्षका अनुसन्धान धेरै छन्। नेपाल पछाडि पर्नुको कारण भ्रष्टाचार एक्लो होइन भन्न मात्र खोजिएको हो।
भ्रष्टाचार नै सबै समस्याको कारण होइन। यो ठूलो समस्या हो, तर सम्पूर्ण समस्या होइन। नेपालका अरू धेरै समस्याबारे पनि छलफल, विचार र विमर्श हुनुपर्छ भन्ने यो आलेखको मत हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्व प्रमुख आयुक्तले भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचार नेपालको एक नम्बर समस्या होइन। पाँचौं-छैठौं समस्या हुनसक्छ।'
मुलुकको विकासमा भ्रष्टाचारभन्दा ठूलो बाधक निर्णयहीनता देखिएको छ। निर्णयहीनता कानुनले ठम्याउन सक्ने विषय होइन। किनकि, निर्णय नगरे कारबाही हुने व्यवस्था हुँदैन। त्यसैले अहिले निर्णयहीनता फस्टाएको छ। हाम्रो व्यवहार र सोचलाई यसले जकडेको छ।
अनिर्णयताको हानी हिसाब गर्ने संस्कार हामीमा कहिल्यै आएन। निर्णयहीन अधिकारीको उत्तरदायित्वमा प्रश्न उठाउने संस्कार र पद्धति छैन।
तर जब निर्णय हुन थाल्छ वा गरिन्छ, हामी सशंकित हुन्छौं। राजनीति, मिडिया, नागरिक समाज सबै धुरन्धर रूपमा लाग्छौं। त्यसको यथार्थ पर्गेल्नतर्फ लाग्दैनौं। राज्यको चौथो अंग पनि वास्तविकता पर्गेल्नबाट चुक्छ। समाजको औसत चेतनास्तरले यथार्थ पर्गेल्ने क्षमता राख्दैन।
अनिर्णयताका केही उदाहरण हेरौं।
मेलम्ची आयोजना बिक्रम सम्वत २०४७ को विचार हो। सुरू गर्नै ढिला। सुरू भएपछि सम्पन्न गर्नै दशकौं लाग्ने भयो। ढिला सुरू हुनु र समयमा नसक्नुको प्रमुख कारण निर्णयहीनता हो। समस्या आए होलान् तर समस्याले समाधान पनि सँगसँगै ल्याएको हुन्छ। राज्यले समस्या समाधान गर्न नसक्ने कुरा आउँदैन। तर काम किन भएन?
दोस्रो, गुणस्तर पूर्वनिर्धारित डिजाइन र 'स्पेसिफिकेसन' अनुसार हुनुपर्छ। प्रक्रिया पूरा गरी कुनै आर्थिक लाभ नलिई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त हुनु कानुनसम्मत भयो।
कर्मचारीतन्त्रको कमजोर मनोबल छ, नैतिक बल छैन। जनताको नजरमा गिरेको छ। संक्रमणकालीन राजनीतिले यसको व्यवसायिकता थिलोथिलो पार्यो। उठ्न खोज्छ, सहारा पाउँदैन। यसका सबल पक्षप्रति समाज सधैं वेखबर रह्यो। सबलता दमित छ। 'मैले राम्रो पनि गरेको छु' भन्ने आँटसम्म गर्न सक्दैन। किनकि, कसैले पत्याउँदैन भन्ठान्छ ऊ।
प्रकाशित मिति: १९ घण्टा पहिले